Paunenge Uchiisa Saiti Nyowani: Pima Kaviri, Cheka Kamwe | Martech Zone
Paunenge Uchiisa Saiti Nyowani: Pima Kaviri, Cheka Kamwe
Chishanu, April 16, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Vatengesi vepaInternet vanowanzo gadzira yavo ichangogadzirirwa webhusaiti zano nekushandisa iyo nguva yese kugadzira uye nekutumira iyo saiti nyowani… wozoyera mhedzisiro yeshanduko. Ini ndinovhara pandinoona mamwe makambani achiendesa akawanda masayiti mukati memwedzi yemumwe nemumwe nekuti yega yega "haina kushanda".
Usati watanga kana kuronga zvigadzirwa zvesaiti nyowani, unofanirwa kuziva zvizere kuti yako saiti parizvino yakagadzwa. Kuendesa nzvimbo nyowani nekudzokorodza kwakafanana nekutangisa marathon nekudzokorora. Iwe hausi kuzotora iyo nguva yawakarasikirwa nayo, urikusundidzira iyo kudzoka kune yekudyara kuenda kunze.
Dai wanga usina analytics zvakazara kuisirwa uye kuyera chimwe nechimwe uye chinogara chiri chesaiti yako, tora nguva yacho kunyatsoishandisa ikozvino - pane yako saiti yazvino. Zvingaite senge kupusa kushandisa nguva kuita analytics zvakanaka pane saiti iwe yauri kuzorasa, asi iwe unofanirwa kunzwisisa sei vanhu vaiuya kune yako saiti, kufambisa saiti yako, uye kushandura pane yako iripo saiti usati wagadzira yako nyowani saiti.
Zvakare, iwe unofanirwa kunyatso kuziva kuti ndeapi mapeji aripo parizvino akarongeka zvakanaka kune akakosha mazwi akakosha. Kushandisa chishandiso senge Semrush, unogona kunongedza iyo mapeji awakatonyora indexed uye ayo ari chinzvimbo mushe nemainjini ekutsvaga. Nguva zhinji vatengesi vanoendesa saiti nyowani ine hutongi uye nzira dzakachinja zvachose. Hazvina kunaka.
Pamusoro pekutsvaga, kureva nzvimbo uye mapeji zvakakosha zvikuru. Kana mamwe mawebhusaiti akaendesa traffic kwauri, kana ako mapeji akaiswa bhukumaki pasocial masaiti ... iwe haudi kuti traffic ipere papeji 404. Gadzira redirection chirongwa kubva kune ako ekare mapeji ane traffic kune ako matsva mapeji - uye simbisa izvo zvirimo zvinoenderana.
Muchidimbu, pima kaviri uye cheka kamwe. Enzanisa yako saiti yekare zvinobudirira kuburikidza analytics, Injini yekutsvaga chinzvimbo uye backlinks. Shandisa saiti yako nyowani kuti utore mukana kune chero zvazvino traffic uye chiremera iwe watove wakavaka uye, chete ipapo, shandisa iyo nyowani saiti.
Enda kunze kwenyika, tambanudzwa, zvishoma kwekanguva
Zvakavanzika Zvekugadzira: Tekinoroji Haigari Yehunyanzvi